आउनुस्, हामी पनि नाचौं ! – Smartkarnalinews
आउनुस्, हामी पनि नाचौं !
बुधबार, चैत्र १२, २०७६ 8:13:27 AM	मा प्रकाशित
काठमाडौं : ‘तिमी मसँग नाच्छ्यौ ? ’ दाङका कमल पण्डितको प्रस्तावले उनकी पत्नी उषा लजाइन् । उनले मुस्कुराउँदै भनिन्, ‘यत्रो जीउ छ । के सकूँला र ? ’ सँगै रहेका छोरी र भान्जीले यो जोडीलाई नाच्न हौस्याए।
नाच सुरु गर्नुअघि कमल र उषाले साबुनपानीले हात धोए । स्यानिटाइजर दले । त्यसपछि दोहोरी गीतको तालमा कम्मर मर्काए । ‘कोरोना भाइरसको डरका कारण साबुनपानीले हात धोएर स्यानिटाइजर लगायौं’, उषाले भनिन्, ‘अनि, हात समाउँदै नाच्दा समय बिताउन सजिलो भयो ।’
आफ्नो वजन घटाउन पनि नृत्यले सहयोग पुग्ने अपेक्षा उनको रहेछ । छरितो जीउका कमलले पनि पत्नीको वजन घटाउन ‘उपयुक्त समय भएकोले सदुपयोग’ गरिरहेको बताए ।
कोरोना जोखिम बढेपछि सरकारले एक साताका लागि लकडाउन (आवतजावत बन्द) घोषणा गरेको छ । मंगलबार बिहान ६ बजे लकडाउन भएलगत्तै धेरैले नाचेर दिन बिताए । लेखिका शीतल दाहालले बिहानको समयमा आकर्षक नृत्य गरिन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि उनले दिउँसोको समय बारीमा गोडमेल गर्दै बिताइन् । अब बिहानको समय नृत्य गर्ने जानकारी उनले दिइन् । ‘व्यायाम पनि पुग्ने र स्वस्थ पनि भइने उपाय खोज्दा नृत्य ठीक लाग्यो’, उनले भनिन्।
नृत्य गर्दा वजनको व्यवस्थापन हुने धेरैको तर्क छ । ‘मुड फ्रेस’ हुने फिटनेसमा पनि सहयोग पुग्ने धेरैको अनुभव छ । त्यसैले पनि कोठाभित्रै ब्याले, बेली, हिपहप, ज्याज, साल्सालगायत नृत्य गर्ने बढेका छन् । कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी त्रास फैलाइरहेका बेला अधिकांश नेपालीले कोठामा नृत्यलाई बढी रोजेको पाइन्छ । पसिना निस्किने गरी नृत्य गर्दा मनमस्तिष्क चंगा हुने र सकारात्मक ऊर्जा अनुभूति हुने उनीहरूको भनाइ छ । नियमित नृत्यले शरीरमा रक्तसञ्चार प्रणाली राम्रो हुने, मांशपेशी बलियो हुने र फोक्सो एवं मुटुलाई पनि स्वस्थ राख्न सहयोग पुग्ने चिकित्सक बताउँछन्।
‘जो नाच्छ ऊ लामो समय बाँच्छ भन्ने उखानै छ’, वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. कपिलदेव उपाध्याय भन्छन्, ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको डरले धेरैलाई तनाव भइरहेको बेला नृत्य गर्नु प्रभावकारी उपाय हो । यसले मुड फ्रेस गराउँछ । तनाव हटाउन सहयोग पुग्छ ।’
यो बेला घरबाहिर निस्किन नहुने वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.प्रकाशराज रेग्मीको भनाइ छ । त्यसका लागि घरभित्रै हलुका व्यायाम, नृत्य गर्ने तरिका उपयुक्त भएको उनी बताउँछन् । ‘व्यायाम वा नृत्य गरेपछि कागतीपानी सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘एक गिलास मनतातो कागतीपानी सेवन गर्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ ।’
प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र १२, २०७६ 8:13:27 AM